Kala duwanaanshaha Delta ee ku faafaya Hawaii maaddaama 30,000 oo safar ah ay maalin walba yimaadaan garoomada diyaaradaha ee gobolka
Bogga ugu weyn » Maqaallada Wararkii Ugu Dambeeyay » Jebinta Wararka Caalamka » Jebinta Wararka Mareykanka » Kala duwanaanshaha Delta ee ku faafaya Hawaii maaddaama 30,000 oo safar ah ay maalin walba yimaadaan garoomada diyaaradaha ee gobolka
Jebinta Wararka Safarka • Jebinta Wararka Mareykanka • Wararka Dowladda • Wararka Jabinta Hawaii • Caafimaadka Warka • News • Dadka • Dib-u-dhiska • Ammaanka • Dalxiiska • Hadalka Dalxiiska • Cusbooneysiinta Socdaalka Safarka • Sirta Safarka • Wararka kala duwan
Dr. Janet Berreman, Sarkaalka Caafimaadka ee Degmada Kauai
30,000 booqdayaal ah ama kabadan ayaa imanaya Hawaii maalmaha qaar, halka Delta noocyada kaladuwan ee virus-ka COVID-19 ay walaac kuqabaan Waaxda Caafimaadka Hawaii.
Laga bilaabo 8da Luulyo, booqdayaasha la tallaalay waxay u safri karaan Hawaii iyada oo aan xaddidneyn, in kasta oo uu si dhaqso ah ugu fidayo noocyada Delta ee fayraska COVID-19 ee Aloha Gobol.
Waaxda Caafimaadka ee Waaxda Caafimaadka Waaxda Shaybaarada ee Gobolka (SLD) waxay ogaatay wadar ahaan 13 xaaladood oo SARS-CoV-2 nooc ah B.1.617.2, oo sidoo kale loo yaqaan Delta kala duwanaansho walaac.
Kala duwanaanshaha Delta ayaa laga helay O'ahu, Maui, Kaua'i, iyo Jasiiradda Hawai'i.
Delta Variant Spreading in Hawaii wuxuu noqdaa mid laga walaaco
Laga bilaabo maanta, sagaal kiis oo ka mid ah noocyada Delta ayaa laga helay O'ahu, laba Maui, mid Kaua'i, iyo mid jasiiradda Hawai'i. Lambarkan waxaa lafilayaa inuu labalaabmo 10-14 maalmood kasta.